मेराे डायरीकाे याद…. – Mukhundo.com
mukhundo.com, २०७७ असार ३ बुधबार
धेरैपछि तिम्रो याद आयो । सबैलाई कस्को भनी होला, तर मलाई मेरो प्रिय डायरीको याद आयो । स्कुलमा पढ्दा लेख्ने डायरी बानी कलेजमा आएर हरायो। अनि धेरैपछि डायरीको याद आयो ।
डायरीलाई मेरो प्रिय भन्दै लेख्ने मेरो बानी हराएछ । बर्षौ बित्यो । तिमीलाई प्रिय भन्न नसकेको । आज तिम्रो याद आएर तिमीलाई प्रिय भन्न मन छ ।
कलेजको जीवनमा भएका सबै तितामिठा पल तिमीसंग साट्नु थियो । तर तिमी र म यती टाढा भएछौ की, तिमीसंग मेरो भेट बर्षौँपछि आज भयो । सरी ! डायरी मलाई माफ गर । म आफ्नो जीवनमा अरु कुरामा बढी भूलेछु र तिमीलाई बिर्सेछु ।
मेरो दुःख र सुखको साथी तिमी थियौँ । अरुले मेरो साथ छोडे पनि तिमीले मेरो साथ नछोडेको हुदा तिमी मेरो प्रिय नै होँ । जीवनमा थुप्रै साथी आए तर पनि तिमीले जस्तो कुरालाई गोप्य राख्ने साथी जीवनमा कहिल्यै पाइएन । मेरो जीवनको सेक्रेट किपर हौँ तिमी !
कहिल्यै डायरीलाई यस्तो भन्ने दिन आएको थिएन । यो लकडाउन बन्दाबन्दीले मलाई पहिलाको डायरी साथीलाई भेटायो । लकडाउनले गाउँघर फर्कायो अनि मेरो प्रिय डायरीलाई भेट्ने मौका दिलायो । तर यति विध्न खुसी पनि छैन । कतै खुसी छु , कतै दुःखी छु ।
बन्दाबन्दीले गाउँघर फर्कायो । तिमीलाई भेटाए । खुसी भए । स्कुल जीवनमा संचारको माध्यम थिएन । सामाजिक संजाल थिएन । आज सामाजिक संजाल र संचार माध्यमले तिमीसंग टाढा बनाए पनि तिमीलाई भेटाउन पाउँदा मेरो खुसीको सीमा थिएन ।
अहिले सामाजिक संजाल छ, दुःख सुखको साथी । त्यो बेला तिमी नै थियाैँ । समय फेरियो, वातारण फेरियो । प्रविधिले साँघुरो बनायो । हातमा स्मार्ट फोनको पहुँच बढायो । गुगल आइडी र गुगलको प्रोडक्टले मैले मेरो डायरीलाई विर्सेछु ।
अहिले मेरो हातमा स्मार्ट फोन छ । गगुलको पहुँच सिधै छ । तर पनि तिम्रो मायाले तानेर आज मेरो हातमा गुगल र फोनको साट्टोमा तिमी छौँ अनि साथमा कलम । तिमी मेरो नजिकको साथी मेरो सेक्रेट किपर, मेरो प्रिय डायरी ।
आजको भेट जीवनको अमूल्य पल रह्यो । मरेपछि भन्न नसकुला तर बाचुन्जेल तिमीलाई अब कहिल्यै विर्सने छैनौँ । साँँच्चीकै तिमी मेरो दुःख सुखको साथी । आशा छ, मेरो गल्ती फेरी नहोस्, तिमीलाई भेट्ने छु छिट्टै……. ।।।
उही तिम्रो रजिना……..
Copyright June 17, 2020 Mukhundo.com Protected. All Rights Reserved.